२०४६ पछिको विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्ले हो भने पनि नेताहरु आफ्नो पद र कुर्सीको लागि केन्द्रित भएको पाईन्छ । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पद र शक्ति नछाड्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा देखिन्छ ।
वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने सत्ता नै म्युजिकल चियर खेलेजस्तो भयो । नोबल कोरोना भाईरस अर्थात् कोभिड-१९ ले विश्व नै आक्रान्त भईरहेका बेला नेपाल पनि पछिल्लो ११ महिनादेखि यो भाइरस झेलिरहेको छ । त्यो झल्ने क्रम रोकिएको छैन । यो महामारीलाई पूर्ण निमुर्ल गर्ने औषधि नआईसके पनि परीक्षणमा रहेको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन केहि फ्रन्टलाईनमा काम गर्नेहरूले लगाए पनि यो सबैको पहुँच भन्दा बाहिर छ ।
अहिले यसको सरल रोकथाम भनेको नै नियमित माक्स लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु नै हो । यस मापदण्डविपरित कुनै भिडभाड तथा हुलहुज्जत गर्न र गराउन नहुने यथार्थता सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेसँगै नेपालमा अनेकन खालमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
गाउँगाउँ बस्तीबस्ती देखी गाडी रिर्जभ गरेर राजधानी (केन्द्र) मा कार्यकर्ताहरूलाई ल्याउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्ने एक किसिमको होडबाजी नै चलिरहेको छ । यस्ता खालका गतिविधिहरूले नेपालमा कोरोनाको महामारीको अन्त्य भएको हो की भन्ने भान गराएको छ । कुनै सर्तकता नअपनाई, सामाजिक दूरी नगरिकन आयोजित यसखालका सडक आन्दोलनहरूले कोरोना महामारीलाई अझ बढी सल्बलाउने डर भने पक्कै पैदा गराएको छ ।
नेपाली राजनीति दलले आफ्नो कुर्सी र सत्ता टिकाउल नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा गरेको चरम लापरवाही भन्न सकिन्छ भन्दा फरक नपर्ला । यस्ता मापदण्ड विपरितका आन्दोलनहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेता तथा पार्टीले लिन आवश्यक छ । आन्दोलन वा विरोध गर्नु कुनै रहर नभएता पनि त्यो बाध्यतामा साँच्चै नै आन्दोलन गर्न र गराउनु छ भने कमसेकम कोरोना विरुद्धको समान्य मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक छ । यस महामारीपश्चात् लगातार विश्व लगायत नेपालको पनि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रतिकुल प्रभाव बारेमा राज्यले अगाडी नै विशेष रणनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
अहिले नै देशलाई पौने १४ खर्ब ऋण छ भने प्रत्येक नेपालीहरूको भागमा ४२ हजार हुन जान्छ । यसरी विश्व मानचित्रमा अहिले हेर्ने हो भने पनि कोरोना महाविपत्तिले मानव जीवनको साथै अर्थतन्त्रको संरचनालाई तहसनहस पारीसकेको संकेत देखाईसकेको छ । अब पनि नेपाली जनताहरू सत्ताकै भरपर्ने र उनीहरूले गरेका हरेक गलत कार्यहरूलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्दै उनीहरूको गुनगान गाउँदै र दुई छाक मासु भातको लोभमा पछि पछि लाग्यौं भने देश तथा नेपाली जनताले ठूलो आर्थिक संकट व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यो लगातारको राजनीतिक किचलो र उही साक्षरता समेत नभएका राजनीतिक दल र पार्टी अब हामी युवा पुस्ताहरूले बहिस्कार गर्नैपर्ने मौका आएको छ ।
पटकपटक ती बाबुबाजेका पार्टीहरूलाई नजिताएको हैन । तर के भयो त ! न देश फेरियो न त जनताले निर्धकसँग गरी खाने बाटो नै बन्यो । हामीले पटकपटक रोज्यौं पुरानालाई अब एकपटक हाम्रालाई होईन राम्रालाई रोज्ने होकी !
असल गुण, क्षमता र दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरू नेपाली समाजमा नभएका होईनन् । राजनीतिमा पनि यस्ता व्यक्तिहरूको विभिन्न कालखण्डमा भएकै हुनुपर्छ । प्रायः यस्ता गुणवत्ताहरूमा देखिने विभिन्न खालका जडताहरू (स्वाभिमान, क्षमता र बिषयवस्तुमा हासिल गरेका विशिष्ठताप्रतिको घमण्ड इत्यादि) सायद हाम्रो समाजको स्तरलाई पाच्य नभकै जस्तो लाग्छ ।
यस्ता व्यक्तिहरू कसैको चाकडी चाप्लुसी गर्दैनन्, विधिका लागि सम्झौता गर्दैनन् । हामीले चाहेको विधिको शासन यस्तै व्यक्तिहरूको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हालको नेतृत्वमा दखल जमाइहेको अवसरवादी, चलाख, बाठो वा शक्तिका लागि सबै उपायहरु अपनाउन सक्ने गुणहरूलाई हाम्रो वर्तमान समाजको स्तरले रुचाएको बुझिन्छ । हामी क्रियाकलापहरू पहिलो समूहले जस्तो गरोस् भन्ने चाहन्छौं, तर अवसर आउँदा हरेक पटक दोस्रो गुणयुक्त समूहलाई अनुमोदन गछौं । किनकी हामी पनि आवश्यक परेका बेला विधि मिचेर पनि आफ्नो हितमा गरिदिने नेतृत्व चाहन्छौं । पार्टी भित्रको छनोटमा नै यो कुरा लागू भईरहेको हुन्छ । हाम्रो समाजको अहिलेको स्तरले नेतृत्वको लागि आवश्यक पर्ने असल गुणहरूको पूर्ण रुपमा पहिचान गरी त्यसलाई छनौंट गर्ने र स्थापित गर्ने क्षमता राख्दैन् ।
प्रकृतिको नियम नै कस्तो रहेछ भने सधैं सबै राम्रा गुणहरू सफल नहुन पनि सक्छन् । त्यसैको फलस्वरुप स्वाभिमानी सद्गुणी, आशालाग्दा थुप्रै व्यक्तिहरू थोरै संघर्षपछि खुट्टा तान्ने विभिन्न आरोपप्रत्यारो लगाउने लगायत विशुद्ध काम गर्ने वातावरण नपाउँदा वाकदिक्क भएर राजनीतिबाटै पलायान हुने वातावरण बन्दै गएको छ ।
यो नेपाली समाजको तितो सत्य र वर्तमान अवस्था हो । जबसम्म यस्ता अवस्थाहरूबाट हामी मुक्त हुदैनौं, तबसम्म हामी भ्रममै बाँचिरहन्छौं ।